Accueil > Gazetin'ny nosy > Solika : Tsy maintsy hiakatra ny vidim-piainana
Solika : Tsy maintsy hiakatra ny vidim-piainana
Miakatra ny vidin’ny solika amin’ny sehatra iraisam-pirenena. 100 dolara ny iray barilina ny vidin’ny solika eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ankehitriny raha toa ka 70 dalara izany teo aloha. Rehefa miakatra toa izany ny vidin’ny solika dia tsy maintsy miakatra koa ny vidin’entana maneran-tany. Mikorontana ny toe-karena eran-tany noho izany. Ny tena voa mafy amin’izany dia ny firenena mahantra sy andalam-pandrosoana.Eo amin’ny 30% no fiakarany amin’ny ankapobeny.
Hoan’i Madagasikara manokana dia tsy maintsy hisy fiantraikany eto amin’ny firenena ny fiakaran’izany vidin-tsolika izany. Ao anatin’ny telo volana no andrasana izany fiakaran’izany vidim-piainana izany. Ny volana janoary 2022 no vinavinaina fa tsy maintsy hisy izany fiakarana izany. Midika avy hatrany izany fa tsy maintsy hisy ny fahasahiranana vaovao. Harin-karena faobe eto Madagasikara dia latsakin’ny enina isan-jato(-6%). Noho izany dia mbola hidina ambanin’izany ny fahantrana hisy manomboka ny taona vaovao.
Hiakatra hatrany amin’ny vidin’ny solika ka tsy hijanona amin’ny amin’ny vidiny 4100 ariary intsony. Hoatrinona no fisondrotany ? Miandry ny fanampahan-kevitrin’ny fanjakana sy ny OMH (office malgache de hydrocarbure) izay ivondronan’ny orinasa mikaroka mpivarotra solika eto Madagasikara.
Na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy hiakatra noho izany ny vidim-piainana eto Madagasikara. Hisy fiatraikany any amin’ny fiaianan’ny mponina sy ny politika izany. Soa ihany fa manana minisitry ny varotra an’i Edgard Razafindravaha izay nilaza fa hampidina ny vidin’ny entona fandrehatra izy ny alatsinainy izao ary ny entana hafa koa. Ingahy Edgard Razafindrazana izay mpandraharaha matihanina mahakasika ny varotra sy ny PPN (entana ilan amin’ny andavan’andro).Enganie ka ho maro ny mpikambana ao anatin’ny governemanta no ho minisitra afaka mamaha olana toa izao.